नेपाललाई ६० लाख डोज कोरोनाविरुद्धको खोप दिने प्रतिबद्धता - Rahashya Khabar Online News Portal Rahashya Khabar Online News Portal
प्रकाशित मिति: 18 November, 2020 8:55 am
“अहिलेसम्म हेर्दा एउटा खोपको १० डलर पर्छ भन्ने छ। त्यसमा दुई डलर हामीले तिर्छौँ भने ८ डलर कोभ्याक्सको तर्फबाट व्यवस्था हुनेछ। उक्त खोप प्राथमिकताका आधारमा लगाइन्छ,” उनले भने। उक्त खोप महामारीको फ्रन्टलाइनमा खटिने स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मीलगायतको समूहलाई लगाइनेछ। “उच्च जोखिममा रहेको जनसङ्ख्यालाई दिने गरी उक्त खोप उपलब्ध हुनेछ। बृद्धबद्धा, स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मीहरू प्राथमिकतामा पर्नेछन्।” गौतमले भने।
त्यसका लागि अर्थ, परराष्ट्र र स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव सदस्य रहेको समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो। खोप खरिद जीटुजी अर्थात् सरकारले सिधै सरकारसँग गर्नेगरी तयारी थालिएको छ। त्यस्तै सरकारले खोपका लागि आवश्यक पर्ने पूर्वाधारको विकास गर्ने तयारी थालिएको प्रवक्ता गौतमले बताए। मन्त्रालयले खोपका लागि कुटनीतिक प्रयास गरिरहेको भन्दै उनले भने, “हामीले सम्भावित खोप कम्पनीसँग कूटनीतिक हिसाबले छलफल गरिरहेका छौं। कूटनीतिक नोट पठाएका छौं। खोपै नबनेको अवस्थामा पूर्ण रूपमा लाग्न सकिएको छैन्।”
सरकारले १२ वर्षमुनीका बच्चाहरूलाई छोडेर ९० प्रतिशत जनसंख्यालाई खोप दिनुपर्ने आकलन गरेको उनको भनाई छ। “१२ वर्षमुनीका बच्चा छोडेर सबैलाई लगाइन्छ। अहिलेसम्मको अन्य खोपको कुरा गर्दा पनि सतप्रतिशत खोप लगाउन सकिएको छैन्। अन्य खोप पनि ९० प्रतिशतसम्मलाई खोप दिन सकिएको छ। त्यही भएर ९० प्रतिशत जनसंख्यालाई खोप दिनुपर्छ भन्ने छ।” प्रवक्ता प्रा.डा. गौतमले भने।
प्रवक्ता प्रा.डा.का अनुसार खोपको छनोट गर्दा पाँच कुरामा ध्यान दिईन्छ। खोपको प्रभावकारी (इफेक्टिनेश), उपलब्धता (एभालिबिलिटी), मूल्य (कस्ट), कति वर्षलाई काम गर्छ (टाइम), कति तापक्रममा राख्नुपर्छ (टेम्प्रेचर) भन्ने कुरालाई हेरेर मात्र खोप छनोट गरिने उनको भनाई छ। “हामीले आफ्नो देशमा खोप बनाईरहेका छैनौं। अर्काको देशबाट किन्ने हो। किन्ने परेपछि किन नराम्रो किन्ने ? राम्रै किन्नुपर्छ। त्यही भएर हामीले धेरै कुरामा विचार गरेर मात्र किन्छौं।” उनले भने।